Ankara | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
EGO, 474 Nolu Hattı Ekspres Hat Olarak Yeniden Düzenledi; Öğrenci dostu kent olma yolunda yeni uygulamaları hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla üniversite öğrencilerine [ပို ... ]
Mansur Yavaş, Ankara Metropolitan Municipality ၏မြို့တော်ဝန်, မြို့တော်၌ကျောင်းသားများကိုနှစ်သက်သော applications များလက်မှတ်ထိုး။ ကျောင်းသားများ၏ဘတ်ဂျက်ကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးနေသောသမ္မတYavaş၏ကတိတော်များနှင့်အတူအကာကာတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်လျှော့စျေးကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Ankara မြို့တော်မြူနီစီပယ်နှင့်TÜBİTAK Marmara သုတေသနစင်တာနှင့်ညှိနှိုင်း။ အကောင်အထည်ဖော်မည့်“ Ankara Noise Action Plan” အတွက်ပရိုတိုကောတစ်ခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ Ankara မြို့ပြမြူနီစီပယ်၏အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ Cumali Kınacıနှင့်TÜBİTAK Marmara [ပို ... ]
Ankara မြို့ပြမြူနီစီပယ်မြို့တော်သည်နှစ်စဉ်စက်တင်ဘာနှင့်စက်တင်ဘာလကြားတွင်ကျင်းပသောဥရောပ Mobility Week ကိုသူမအနေဖြင့်ရေရှည်တည်တံ့သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုအားပေးထောက်ခံရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ သာ။ ကြီးမြတ် Ankara [ပို ... ]
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açılışı gerçekleştirilen “30 Ağustos Zafer Parkı” içindeki “Bisiklet Yolu” yapım çalışmalarında son aşamaya gelindi. Büyükşehir Belediyesi’nin, “Bisiklet Yolları Projesi” [ပို ... ]
ချွတ်ယွင်းမန်နေဂျာများအခမဲ့တူရကီ YHT မတော်တဆ
"ဟုအဆိုပါအနေအထားကိုအမှန်တကယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သူအပြစ်ပေးရပါမည်နှင့်တာဝန်ရှိသည်သောသူတို့က, ဘာပဲအာဏာပိုင်" ဟုသူက 13 ဒီဇင်ဘာလ 2018 တူရကီအတွက်9လူတွေ YHT မတော်တဆမှုမှာသူတို့ရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသမိုင်းဝင်ကလည်း, 93 ကလူဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည် traffic controller ကို Erbey ရှေ့နေ, [ပို ... ]
Keçiörenli Verdi နိုင်ငံတော်သမ္မတအနှေးညွှန်ကြားချက်များတောင်းဆို
Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan Başkentin dört bir yanında yeni ulaşım projelerini hayata geçirirken bir yandan da kullanım ömrünü tamamlayan ve deforme olan mevcut yolların bakımını gerçekleştiriyor. Vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarının [ပို ... ]
Sincan တူရကီ Sincan Inter-ဒေသဆိုင်ရာရထားနာရီ
11 / 06 / 2019 Levent Ozen 0
Sincan Sincan နေ့စဉ်3ရထားမြို့လယ်ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်ကိုယ်ရံတော်ကနေရွေ့လျားနေသည်။ DMI ပိုင် Sincan Sincan ပြည်နယ်မီးရထား TCDD ဘူတာရုံမှတဆင့်ဖြတ်သန်းအားလုံးရထားရထားအမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်။ ရထားကုလားထိုင် Pullman စကားများအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ [ပို ... ]
တူရကီ YHT ပိုနာမည်ပျက်မည့်မတော်တဆမှု!
Ankara’da9kişinin hayatına mâl olan tren kazasında skandalların ardı arkası kesilmiyor. Kazadan5gün önce elle makas değiştirmede sorun olduğu uyarısı yapıldığı ortaya çıktı. Türkiye’de tren kazaları yaşanıyor, yetkililer [ပို ... ]
အမျိုးသားနေ့အတွက်အခုဆိုရင် Da အခမဲ့ရန်တူရကီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှတ်ပုံတင်မည်
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim öncesi verdiği vaatleri birer birer yerine getiriyor. Başkan Yavaş’ın talimatıyla Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Başkentlileri sevindiren bir karar daha çıktı. Meclise sunulan Başkanlık yazısı [ပို ... ]
အဲဒါကို 'ကတ္တရာသုံးပါဝင်လာအစုရှယ်ယာဖယ်ရှားပြီး' 'အနှေး Hold ၏နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏မေးခွန်းတစ်ခုခဲ့သည်
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimler öncesinde vatandaşlara verdiği sözleri birer birer yerine getiriyor. Göreve geldiği ilk günden itibaren Büyükşehir Belediyesi’nde “Şeffaf Yönetim” anlayışı çerçevesinde önemli uygulamaları hayata [ပို ... ]